Sheer keessatti hojjechuu - Sheer Itiyoophiyaa
Saayinsii akkaataa Abaaboo keessatti guyyaa guyyaadhan garaagarummaa uumuu
Sheer keessatti hojjechuu jechuun Omishaa angooxoo addunyaa keessaa isa guddaa ta’e keessatti hojjechuu jechuu fi induustirii saayinsii akkaataa angooxoo keessatti dursaan deemuu dha. Nuti Itiyoophiyaa keessatti seenaa dheeraa fi muuxannoo angooxoo omishuu kan qabnuu dha. Itiyoophiyaa keessatti hojjettoota gara 12,500 qabna. Dabalataanis sheeriif hojjechuu jechuun qaama garee hiriyaa ogeessota keenyaa, guddinaa fi dagaagina dhuunfaaf carraalee hedduu kan irraa argatanii dha. Safuu/sona fi amantiiwwan keessoo keenyaa: Uummata fedha qabeessa, miiltoo kabajamoo, gareewwan adda addaa fi tarsiimoowwan turmaata qabanii dha.
Hojjettoota keenya argadhaa
Sona fi Amantii
Nuti ciminaaf kutattoota, fi kichuu dhiyeessuu keenyaan kan boonu, jireenya uummattootaa keessatti qulqullinaa fi halluu fiduuf kutattoota kan taane dha. Nuti qajeeltummaa tilmaamna, mul'ata kan kabajnuu fi yeroo hunda waan jenne kan raawwannuu dha. Nuti dandeettii ogummaa dhuunfaa fi garee keenya ni guddisna.
Nuti maammiltoota, biqilchitoota fi hawaasawwan waliin gamtoominaan amanamoo dha; amanamtummaa fi iftoomina kan ijaaranne dha. Nutii isaan kanneen biroo kan keessummeessinu akkuma nuti ofii keenyaa tajaajilamuu barbaannutti; nuti waliin guddanna
Yaadni garaa garaa kan dhufu gareewwan garaa garaa irraa irraati: nuti hunda hammattoota, nuti gufuuwwan irraa kan barannu dha, fi milkaa'ina keenya kan waliin ayyaaneffanuu dha. Nuti saaxilamummaa kan agarsiisnu fi itti gaafatamummaa fi amanamummaan kan raawwannuu dha
Turmaata kan qabu
Nuti kaayyoowwan keenyaaf fedhii cimaa qabna, murtee kennuuf ragoolee irratti kan hundoofnu, yaada haaraa burqisiistota. Nuti tarsiimoo yeroo dheeraa fi murtee kennuu yeroo gabaabaa fuul duree uummata, hawaasawwan fi naannoo keenyaa ijaaruuf kan fayyadamnuu dha.
Read all about Kaampaanii keenya fi bakka itti argamu
Read all about Uummata keena argadhaa